राज्यमा संक्रमितको संख्या 4500 भन्दा बढ़ी: 92 जनाको ज्यान गयो - The Sikkim Chronicle
Mandatory 10 days quarantine period for local...
SC Desk Apr 23, 2021030
High level level meeting chaired by CM for COVID-19...
SC Desk Apr 23, 20210129
SC Desk Apr 22, 20210107
"TB Haarega Desh Jitega"
SC Desk Apr 20, 20210349
SC Desk Feb 18, 20210345
SC Desk Feb 17, 20210747
SC Desk Feb 5, 20210492
SC Desk Feb 4, 20210549
SC Bureau Feb 25, 20210140
Shradha R. Chhetri Feb 5, 20210530
SC Bureau Dec 25, 202003587
SC Desk Oct 28, 20200440
admin Sep 1, 202002122
admin Sep 1, 20200735
admin Sep 1, 20200873
admin Sep 1, 20200901
admin Sep 1, 202001073
admin Sep 1, 202002260
admin Sep 1, 202001242
admin Sep 1, 202001193
admin Sep 1, 202001273
admin Sep 1, 202001488
admin Sep 1, 202001270
SC Bureau Feb 27, 20210137
SC Bureau Jan 16, 20210992
SC Bureau Dec 30, 202006930
SC Desk Nov 30, 202001242
A fine line: Cyberbullying and Cyber Crime in...
Rohonit Hang Subba Sep 30, 202001893
Sherab Palden Bhutia Mar 31, 20210329
Shradha R. Chhetri Mar 31, 20210156
Shradha R. Chhetri Mar 30, 20210175
Sikkim to witness first ever mix martial arts...
Sherab Palden Bhutia Mar 29, 20210456
Shradha R. Chhetri Mar 24, 2021033
Sherab Palden Bhutia Jan 23, 20210153
Rohonit Hang Subba Sep 7, 202002681
SC Desk Mar 26, 2021058
Sherab Palden Bhutia Mar 19, 20210617
Religion and Caste system in voting behavior...
SC Bureau Feb 23, 20210146
Sherab Palden Bhutia Feb 20, 20210198
Sherab Palden Bhutia Mar 21, 20210725
Sherab Palden Bhutia Mar 16, 20210355
Sherab Palden Bhutia Feb 23, 202102942
SC Bureau Oct 24, 2020 1 1454
SC Desk Feb 14, 20210302
SC Bureau Jan 29, 20210544
SC Bureau Jan 15, 20210200
SC Bureau Jan 2, 20210187
SC Bureau Apr 16, 20210428
Shradha R. Chhetri Mar 23, 20210336
This Women’s Day I am not Silent, I #ChooseToChallenge
SC Bureau Mar 8, 20210277
Hydro Project, Environment Issues and It’s Political...
SC Bureau Mar 1, 2021033
Sikkim and Manipal hospital - Trials and Tribulations
SC Bureau Feb 19, 20210114
Bimal Thapa Feb 4, 20210263
Bimal Thapa Jan 25, 20210688
Bimal Thapa Jan 23, 20210853
Bimal Thapa Jan 22, 20210528
Bimal Thapa Aug 20, 202001017
Bimal Thapa Aug 15, 202001120
admin Jul 16, 202002482
Bimal Thapa Jul 5, 20200732
SC Desk Jan 6, 20210584
admin Sep 1, 202001468
admin Sep 1, 202001197
admin Sep 1, 20200983
admin Feb 3, 20200717
admin Feb 4, 20210210
admin Feb 4, 20210417
admin Dec 30, 20200446
admin Dec 30, 20200679
admin Dec 30, 20200480
राज्यमा संक्रमितको संख्या 4500 भन्दा बढ़ी: 92 जनाको ज्यान गयो
Nov 17, 2020 - 20:24
गान्तोक, 17 नोभेम्बर: राज्यमा कोभिड-19 संक्रमणको बढ़दो क्रम देखिएको छ। संक्रमितको कुल संख्या 4500 भन्दा बढ़ी पुगेको छ। आज 27 वटा नयाँ संक्रमण देखिएको छ। गत 11 दिनमा मात्रै कुल 407 जना संक्रमित पाइएको स्वास्थ्य विभागद्वारा जारी तथ्याङ्कबाट थाहा लागेको छ। सोही अवधिमा कुल 17 जनाको ज्यान गएको छ। गत 11 दिनको आँकडालाई केलाएर हेर्दा संक्रमितहरुमध्ये प्राय 81 प्रतिशतभन्दा बढ़ी पूर्व जिल्लाबाट रहेका छन्। 12 प्रतिशत पश्चिम जिल्लाबाट अनि6प्रतिशत दक्षिण जिल्लाबाट रहेको देखिएको छ। उत्तर जिल्लामा भने कमै संक्रमण देखिएको छ।
अहिलेघड़ी अन्तर्राज्यीय अवआगमन खुल्ला गरिएको सर्वसाधारणलाई विधितनै छ। राज्यका प्राय: सबै स्थानहरुमा पर्यटन पनि खुल्ला गरिएको छ। स्वास्थ्य विभागले पटक-पटक अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे बताउँदै आएको छ। बजारमा समय-समयमा भीड़ देखिएको छ। गान्तोकको जाम पनि लगभग पहिलेकै जस्तो देखिएको छ। भाड़ाको अधिक बोझलाई मध्यनजर गरी साझा सवारीसाधनमा 5+1 को सट्टा 7+1 को नियम लागु गरिएको छ। होटलहरु प्राय: खोलिएका छन्। रेष्टुरेन्ट तथा फास्टफुडहरु पनि खोलिएका छन्। स्थिति झण्डै सामान्य जस्तो देखिएको छ अनि धेरैलाई कोरोनाको डर पनि बिस्तारै कम भएर गएको महसुस गरिएको छ। तर स्थिति अझै सामान्य भएको छैन। दुई साता नबित्दै 17 जनाको ज्यान गइसक्नु लर्तरो कुरा होईन। केवल अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्र जाँच गराउने स्वास्थ्य विभागको सुझाउ रहँदा रहँदै सानो राज्यमा दैनिक औसत 40 जना संक्रमित देखा पर्नु चानचुने कुरा होईन। 92 जनाको ज्यान गइसकेको छ। राज्यले कोभिड योद्धाहरुसमेत गुमाएको छ। शिक्षण संस्थान खोल्न सकिएको छैन।
धेरैलाई मास्क त्यति आवश्यक लागेको छैन। बिहेमा-मलामीमा भीड़ पनि देखिन थालेको छ। सबै ठाउँ अघिझैं दुरी अप्नाएको देखिएको छैन। लगातार संक्रमण बढ़ीरहँदा अनि दैनिक कसैको ज्यान जाने क्रम नरोकिइरहँदा सावधानीमा कमी हुनु चिन्ताको विषय हो। कोरोनाले विशेष रोगीहरुलाई चालै नपाईं खोसेर लाने क्रम जारी छ। बुढ़ा-बुढ़ीलाई यसबाट खतरा छ भनी बारम्बार भनिएको छ। विश्वका तमाम विज्ञ यसको खोप बनाउन लागीपरेका छन्। केही सफलता हात लागे पनि बजारमा खोप आएर सबैले लगाउन पाउनुमा अझ केही समय पर्खनु पर्ने स्पष्ट देखिएको छ। यस्तोमा सबैले आफू तथा आफ्नो परिवारको सुरक्षा आफैले गर्नु पर्ने देखिएको छ।
राज्यले अहिलेसम्म कुल 60 हजारभन्दा बढ़ी कोभिड जाँच गरिसकेको छ। अहिलेघड़ी राज्यमा 312 जना सक्रिय संक्रमित रहेको जानकारी स्वास्थ्य विभागले गराएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 4548 पुगेको छन्। यो त रिपोर्ट गरिएको संख्या मात्र हो। संक्रमितको संख्या योभन्दा बढी छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। रोगको लक्षण नभएका धेरै संक्रमितहरुले जाँच नगराएका हुन सक्छन्, त्यसैले खतरा टलेको छैन।
अहिलेसम्म 4060 जना निको पनि भइसकेको जानकारी स्वास्थ्य विभागले गराएको छ। तर संक्रमणले कुन बेला कुन व्यक्तिमा कस्तो रुप लिन्छ ठोकेर भन्न सकिन्न। भाइरस नयाँ भएकोले दिन-दिनै तथ्य पनि नयाँ आएको सबैलाई विधित नै छ। संक्रमणको औषधी नभए पनि त्यसबाट कसरी बाँच्न अथवा त्यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्ट तथ्य भने विश्वसँग छ। त्यैले खोप तयार नभएसम्म आफू तथा आफ्नो प्रियजनको सुरक्षाको निम्ति खूबै सावधानी अप्नाउने आवहान राज्यको स्वास्थ्य विभाग तथा विभिन्न संघ संस्थानहरुले पटक पटक गर्दै आइरहेका हुन्।
BNHS and the Sikkim Connection: A Historical Perspective to commemorate the Birdman...
Crimes in Confinement: Lockdown phase showed rise in crimes against animals in Sikkim
रेली खोला पुल भत्किएपछि रेशी अनि खाम्दोङ चेकपोस्टबाट आउ-जाउ...
admin Jun 21, 20200491
सिक्किममा अहिलेसम्मको कोभिड-19को स्थिति
Bimal Thapa Jun 25, 20200560
ज्यान गुमाउने कोभिड योद्धाको परिवारलाई2लाख रूपियाँ
Bimal Thapa Sep 30, 202001139
Bimal Thapa Sep 20, 20200945
Bimal Thapa Nov 1, 202003438
खुशीको खबर: अहिलेसम्म सिक्किममा5जना कोरोनाबाट निको भए
SC Desk Jun 18, 20200636
SDF condemns the questionable speech by CM PS Tamang: Press...
SC Desk Apr 18, 20210599
RAT screening for Tourists at Rangpo check post.
SC Desk Apr 17, 20210574
SC Desk Apr 20, 20210357
Introduction to the caste system in our society through...
SC Bureau Apr 16, 20210337
Fish Mela to be held for the first time in sikkim
SC Desk Apr 19, 20210207
SC Desk Apr 19, 20210200
SC Desk Apr 18, 20210565
Six winners from Sikkim declared at the NERES 1.0 entrepreneurial...
admin Jun 23, 20200260
Magical Muffler Man ﻿
SC Desk Feb 16, 20200247
More innovations arise in the state to better combat COVID-19
SC Desk Jun 20, 20200294
सिक्किमका युवाहरुले खेलकूदलाई अब पेशाको रुपमा लिनुपर्छ:...
admin Aug 29, 20200681
गान्तोक, 30 अगस्त: राष्ट्रीय खेल दिवसको उपलक्ष्यमा राज्य सरकारले खेलकूद सम्बन्धी...
SPYF addresses grievances with pharma companies and the...
SC Desk Jun 17, 20200353
Sikkim Lockdown – Are we pushing the panic button?
admin Sep 1, 202001038
Unified patience and determination were what the Prime Minister stressed on while...
Kalimpong woman passes away due to COVID-19, 10 from Sikkim...
SC Desk Mar 30, 20200438
HIking to glimpse the elusive Red Panda
SC Bureau Sep 19, 202001084
Breaking stigma, changing culture: Sikkim's mental health...
SC Bureau Oct 10, 202001259
admin Jul 17, 20200254
global news sc
कोल्थाङ-माङ्जिङ जिल्ला पञ्चायतद्वारा उपयोगी सामान वितरण
Indian economy in shambles, Matters only to get worse from...